Ngwa maka ndị ọbịa na Gender Dysphoria & Transgender. | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ihe eji enyere ndị ọbịa aka
You nwere ike ịchọta: -
Njikọ akwụkwọ na-atụle echiche nwoke na nwanyị ugbu a. Akwụkwọ ụmụaka.
Otutu ndi dibia edegoro ihe ndi edere gburugburu transgender.
Prọfesọ John Whitehall edeela ọtụtụ usoro gbasara Gender Dysphoria. Ọtụtụ nwere ntụnye mmụta sayensị na gọọmentị.
Enwere njikọ dị na Weebụsaịtị Walt Heyer. Walt gbanwere ma biri dị ka nwanyị ruo afọ 10 tupu iwepụ ya wee kwado ndị transgender ndị ọzọ chọrọ ịhapụ ndụ transgender
Ọtụtụ ndị ahapụla ụdị ndụ LGBT ha site n'enyemaka nke ndị ọzọ. Ndị a bụ akụkọ banyere mmadụ 17 nke na-egbochi azịza na usoro ọgwụgwọ ntụgharị na-emebi ndị mmadụ mgbe niile.
Na-egbochi Nsogbu, na-akwalite Ikpe Ziri Ezi bụ akwụkwọ sitere na Mahadum La Trobe, Australia, nke na-ekwu na usoro ntughari na-emerụ ndị mmadụ ahụ. Dr Con Kafataris edela nkatọ ya banyere akwụkwọ La Trobe.
Dr John Whitehall dere usoro vidiyo 12 na Childhood Gender Dysphoria. Akwukwo vidio ndi ozo, nke apuru ighari na ntaneti n'ime asusu ndi ozo, nwere ike ịchọta ebe a.
Prọfesọ John Whitehall dere na akwụkwọ akụkọ Quadrant.
Isiokwu na Gender Dysphoria, Hormone Blockers na ihe niile Transgender
Mmachibido iwu ndị ọzọ maka okike ihe omumu na umuaka. - Prọfesọ John Whitehall. Gọọmentị Labour nke Victoria nọ na nhazi usoro iwu iji machibido ihe a na-akpọ 'ọgwụgwọ ntụgharị' nke ọ kọwara dị ka 'omume ma ọ bụ ọgwụgwọ ọ bụla nke na-achọ ịgbanwe, na-ebelata ma ọ bụ wepụ ụdị mmadụ nwere mmekọahụ ma ọ bụ njirimara nwoke'.
Isi okwu dị na mkpebi ịme maka ọgwụgwọ mgbanwe mgbanwe okike: Ajụjụ & Azịza. - Okanmuta Dianna Kenny.
Egwuregwu ụmụ nwanyị na nkwenye nwoke na nwanyị: Usoro nkwekọrịta maka ụkpụrụ omume ahụike. - Okanmuta Dianna Kenny. -
Na 2009, Caster Semenya onye South Africa na-eme egwuregwu meriri site na oke 20 mita site na onye na-ama ya aka, ihe omume 800m ụmụ nwanyị na asọmpi egwuregwu ụwa. Mmeri ya adịteghị aka.
Mkpesa bilitere na Semenya bụ “nwoke n'ezie.” Nwa nwoke 18 dị afọ site n'obodo nta dara ogbenye na Osimiri Limpopo na South Africa ghọrọ isi okwu mkpuke nke mgbasa ozi nke mba ụwa gụnyere gụnyere mwepụta nke ọgwụ ahụike ya na-enweghị nkwenye ya.
Dysphoria Gender maka Ndị Na-enye Ihe: Dr. William Malon.
Childrenmụaka ndị nwere oke mmụọ: ihe gbasara ndị ọrịa anaghị anata enyemaka? - Dr. Robert Kosky.
Ntuziaka usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ maka ụmụaka nwere nsogbu nwoke na nwanyị ugbu a edoghị anya. Nkwupụta ahụike a na-akọwa ụmụaka asatọ nwere mmekọrịta nwoke na nwanyị na-akpa agwa, ndị a na-emeso n'ụlọ ọgwụ maka ụmụaka. A na-enye nsonaazụ dị mkpirikpi na nchọpụta ahụike ogologo oge, nke na-egosi nsonaazụ dị mma n'ozuzu. nrụgide, ma ndụ ụmụaka dabere na amamihe ha.
Mmekọahụ na Mmekọahụ - Dr. Paul McHugh.
Ntuziaka Onye editọ: Ajụjụ ndị metụtara mmekọahụ na okike na-emetụta ụfọdụ akụkụ na mmekọrịta onwe onye kachasị nke ndụ mmadụ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ha kpasukwara ndọrọ ndọrọ ọchịchị America. Anyị na-enye akụkọ a - nke Dr. Lawrence S. Mayer dere, onye na-ahụ maka ọrịa na-efe efe gbasara ọzụzụ, na Dr. Paul R. McHugh, nke kachasị arụ ụka
onye isi mgbaka America di omimi nke ọkara nke iri gara aga.
Ntughari ọgwụgwọ Therapy - Dr. Con Kafataris.
Mahadum La Trobe mepụtara akwụkwọ "agụmakwụkwọ" nke akpọrọ igbochi ihe ojoo, ịkwalite ikpe ziri ezi. Dr. Kafataris gosipụtara ọtụtụ mmejọ ya.
Ezinụlọ Nke Mbụ - NZ. Warningdọ aka ná ntị dibia dibia na New Zealand - Prọfesọ John Whitehall.
Ọrịa nke 'dysphoria nke nwata' na-efe mba Ọdịda Anyanwụ. N'ịbụ onye dara site na ụkọ ihe na-erughị afọ iri gara aga, enwere mmụba na-abawanye na ọnụ ọgụgụ ụmụaka na-ebugharị na ngalaba ndị mepụtara pụrụ iche na ụlọ ọgwụ ụmụaka nwere mkpesa na 'a mụrụ ha na ahụ na-ezighi ezi'.
Usoro ọgwụgwọ ntụgharị nke na-arụ ọrụ.
Otu nwoke nwere mmasị nwoke, ndị nwanyị abụọ nwere mmekọ nwoke na nwanyị na onye trans trans na-ekwu maka ịhapụ ndụ mbụ ha na otu esi etinye ọgwụgwọ Conversion "ndụmọdụ".
Arịrịọ maka Nchọpụta Ndị Omeiwu na Mgbanwe Ahụike na Ahụike nke Childrenmụaka.
Akwụkwọ ozi nke Prọfesọ John Whitehall degaara Mịnịsta na-ahụ maka ahụike Australia, MP Greg Hunt.
Rush Limbuagh Show Ajụjụ ọnụ - Prọfesọ John Whitehall. -------------
Njikọ aka na Ọrụ Ndị Ndụmọdụ Ọkachamara. --------------------
Njikọ ndị edemede na ndị na-ere akwụkwọ.
Akwụkwọ na-ekwu okwu banyere echiche Transgender. Akwụkwọ ndị e dere ede kwesịrị ekwesị ka a gụrụ ụmụaka.
Gịnị Ka E Ji Littlemụntakịrị Mee? Onye edemede - Wendy Francis.
O si na Koorong Bookshop. Pịa -> Ebe a.
Gịnị Ka E Ji Littlemụ Nwaanyị Mee? Onye edemede - Wendy Francis.